Semalt Expert Shares Video Marketing Tips Zvose ZVA Champion Unofanira Kuziva
Mukushambadzira kwepaIndaneti, kutsvaga injini yekutsvaga (SEO) kunokosha kune vanhu vazhinji vanounoda kuita mabhizimisi avo kwenguva refu. Kugadzirisa zvinyorwa zviri nyore sezvo zvinosanganisira nzira dzinozivikanwa. Zvisinei, imwe yekutengeserana kwedhigirimasangano anoona izvi zvakanyanyisa kana vasingazivi zvokuita. Video Search Engine optimization inodiwa kune dzose paIndaneticontent. Kubvira muna 2006, Google yakatenga YouTube uye kubva ipapo, kushandisa SEO pamaklipi evhidhiyo kunokosha zvakakosha sekune imwe mimwe michina yepaIndaneti - open source mysql management tools.
Makambani akawanda anowana kushandiswa kwevhidhiyo munzira dzakasiyana-siyana. Somuenzaniso, vakawanda FAQs uyezvidzidzo zvinoda nzira dzevhidhiyo yakanaka yekudzidzisa. Sekuziva kukosha kwe SEO mavhidhiyo, mumwe angashamisika kuti angashandisa sei.
Andrew Dyhan, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt Digital Services, rinotsanangura mazano mazhinji anokosha anogona kuita kuti mavhidhiyo akupe iwe yakakwirira:
Kureba kwezviri mukati.
Zvakakosha kusanganisira mazwi makuru mukati memashoko ebhuku remashoko ako. Vhidhiyoinofanira kushanda sechinhu chiri pamusangano we blog. Mavhidhiyo anofanira kunge akazara, achidzidzisa asi akakwana zvakakwana. Ongororo dzakawanda dzinoratidza izvozvovasereji vanoshandiswa vanopedza maminitsi maviri pavhidhiyo. Chengetedza urefu hwevhidhiyo yako mafupi: maminitsi mashanu. Vhidhiyo inowedzera iyo yose yakavharidzirwayehupenyu hwako uyewo kupa chidziro chekudzidzira kwevashandi vako vanoshanda kuti vakodze nekuwana zvakakodzerwa..Mavhidhiyo anogamuchirazvikamu pazvikwata zvakaita seYouTube. Google bots inogona kutora zvinyorwa zvakabatana zvakapedzisira zvikava zviyero zvekuisa vakawandayewebsite.
Chiratidzo, zvinangwa, uye kukosha kwevhidhiyo SEO chirongwa ndiwo maitiro makurufunga. Mumwe anogona kugadzira mushandirapamwe wekutsvaga mavhidhiyo ane basa rine basa rakasimba. Zvisinei, zvinangwa zvevhidhiyo zvine simba gurupamusoro pekukosha kwevanhu vanovashandisa. Semuenzaniso, vhidhiyo yakagadzirirwa kuisa branding inogona kudzidzisa uye inosanganisira kutenga iko zvino nzira. Zvisinei, video yekambani yeInishuwarenzi yezvikonzero zvekudzidzisa haifaniri kuva nayo.Pane kudaro, ivo vakuru pamusoro pekukosha kwekuiswa.
Kana munhu ari kutsvaga muvhidhiyo yepaIndaneti, maonero evanhu ndivo vanhu vakawandafunga. Vhidhiyo nemitungamiri kana izvo zvinogona kuita kuti kugoverana ndeimwe yenzira dzakanakisisa dzekuwana kugadzika kwemaonero.Nzira dzinoverengeka dzinogona kuita kuti vhidhiyo ibudirire muzinga iri rinotevera. Semuenzaniso, kubatanidzwa kwekugadzirisa zvinyorwa. Mumwe anogona kuisasubtitles, captions uye zvinyorwa zvinotsanangurwa pavhidhiyo. Izvi zvinoshamisa zvinokurudzira zvose zviri kuonekwa uye zvinonzwikakuwedzera kukosha.
MuSEO yemazuva ano, zvisikwa zvekugadzira uye vhidhiyo kutengesa mamwe maitiro matsva iyoiri kuita zvakakosha pamaitiro akawanda eSOO. Vandinoshanda navo neni tinokurudzira kushandisa zano iri kunyanya kune vateereri izvorinoreva mavhidhiyo ekutsanangurwa. Kunyange zvazvo pfungwa idzi mbiri dzingaita sedzakasiyana, zvose zviri zviviri maitiro ekutengeserana ema digital uye anekodzero yekuwedzera kuchinja. Mavhidhiyo akanaka mukutsanangura pamwe nekuraira vateereri kuenda kupikudana-ku-chiito zvinhu zvewebsite yako. Somugumisiro, kutengesa mavhidhiyo kunogona kugadzirisa basa rekuisa webhusaiti yako, kunyanyatsvaga injini.